FIGO : Kooxaha Talyaanigu Waa Inay Wax Ka Bedelaan Aragtidooda Koobabka Yurub
HomeItalyFIGO : Kooxaha Talyaanigu Waa Inay Wax Ka Bedelaan Aragtidooda Koobabka Yurub
Luis Figo ayaa ku booriyey kooxaha Seria A inay wax ka bedelaan qaab ciyaareedkooda oo ay niyadoodana galiyaan inay dib ugu noqdaan guulihii ay ka gaadhi jireen horyaalka qaarada Yurub.
Juventus oo kamid ah kooxaha ku hirdamaya horyaalka labaad ee Yurub ee Europa Leagu ayaa ah kooxda kaliya ee naadiyadii Talyaaniga kaga sii baaqiga ah horyaalada laga ciyaaro Yurub oo dhan, iyadoo kooxihii la socday ay ku hadheen wareegyadii horeba.
Ciyaaryahankii hore ee kooxda Inter ayaa aaminsan in Talyaaniga ay la gudboon tahay inuu ka fikiro sidii uu ugu noqon lahaa guulihii uu ka so hoyn jiray Yurub.
“Mushkiladu sanadkan oo kaliya may qabsan, sanadihii u dambeeyey oo dhan sidan ayuu xaalkoodu ahaa,” Ayuu Figo yidhi isagoo la hadlaya wargeyskan La Gazzetta dello Sport.
“Serie A waa horyaal adag, laakiin Talyaaniga waxa ka jira dhaqan gaar ah, hab khaas ah oo ay kaga duwan yihiin horyaalada kale oo lagu qiimeeyo kubada cagta ayaa ka jira.
“Arimuhuna way ka duwan yihiin Yurub, ka ciyaarista tartamada Yurub waa arin kale iyaduna – waa inaad ka qayb gashaa adigoo guul ku fikiraya, ma sugi karaysid uun guusha, ama waa inaad qaab ciyaareed sare la shir timaadaa. Arinta (Talyaaniga taalaa) waa mid dhaqan la xidhiidha.
“Marka koobaad ciyaaryahano fiican la soo wareeg, laakiin arintani waxay had iyo jeer ku xidhan tahay dhaqaalaha ku soo galla. Intaa kadib waa in xidigahaa aad soo iibsatay wax ka bedelaan qaab ciyaareedkaaga.
“Kuwa maamula kubada cagta Talyaanigu aragtidaas waa diidan yihiin iyagu.”